ဖက်ရှင် – Media9
ခေတ်ရေစီး ဆယ်လီ ဖက်ရှင် အနုပညာ အမေးအဖြေ
Instagram နဲ့လိုက်မယ့်ပုံစံမျိုးဆို Instagram မှာပဲတင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့…’သင်ဇာဝင့်ကျော်’…
[Unicode] “ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကဲဖော်ကဲဖက်တွေပေါ့။ကိုယ်တွေအဖွဲ့ကအရမ်းဗရုတ်ကျတာ။အသက်တွေကြီးလာပြီဆိုတော့ဒါတွေကအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပါပြီ။အဲဒီအချိန်တုန်းကကဲခဲ့၊ပျော်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အရမ်းကိုဝမ်းသာတယ်။ကျေနပ်တယ်”ဆိုတဲ့ ‘သင်ဇာဝင့်ကျော်’…. [Zawgyi] “ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ကဲေဖာ္ကဲဖက္ေတြေပါ့။ကိုယ္ေတြအဖြဲ႕ကအရမ္းဗရုတ္က်တာ။အသက္ေတြၾကီးလာျပီဆိုေတာ့ဒါေတြကအတိတ္မွာက်န္ခဲ့ပါျပီ။အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကကဲခဲ့၊ေပ်ာ္ခဲ့ရတဲ့အတြက္အရမ္းကိုဝမ္းသာတယ္။ေက်နပ္တယ္”ဆိုတဲ့ ‘သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္’….
ဂီတ ဆယ်လီ ဖက်ရှင် လူမှုဘဝ အနုပညာ အမေးအဖြေ
မေတ္တာရင်ခွင် မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Novem Htoo ရဲ့မွေးနေ့အလှု……
[Unicode] Music For Change Organization နှင့်အတူ ရွှေပြည်သာမှာရှိတဲ့ မေတ္တာရင်ခွင် မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းမှာ အခြေခံ drum တီးနည်းကို နေ့တဝက်တာသင်တန်းပေးရင်း သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ Extant band ရဲ့ အဆိုတော် ‘Novem Htoo’… [Zawgyi] Music For Change Organization ႏွင့္အတူ ေ႐ႊျပည္သာမွာရွိတဲ့ ေမတၱာရင္ခြင္ မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းမွာ အေျခခံ drum တီးနည္းကို ေန႔တဝက္တာသင္တန္းေပးရင္း သူ႕ရဲ႕ေမြးေန႔ကိုေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ Extant band ရဲ႕ အဆိုေတာ္ ‘Novem Htoo’…
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ဗွီဒီယို အနုပညာ အမေးအဖြေ
နိုဝင်ဘာ ၂၄ မှာ The Model Academy final ပွဲကြီးရှိတယ်။အားလုံးအားပေးကြပါဦး…’သန္တာလှိုင်’…
[Unicode] ‘ ဘယ်ရုပ်ရှင်မဆိုအားပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ပရိတ်သတ်နဲ့ကိုယ်ရှိတဲ့ အတွက်ဆက်လုပ်ပါ။ ဒီကားမှာတော့ Internationally ထိုး ဖောက်ပြီးအောင်မြင်လို့မ တို့မျော်လင့်ထားပါတယ် ‘ လို့ဆိုတဲ့ ‘သန္တာလှိုင်’ ‘ [Zawgyi] ‘ ဘယ္ရုပ္ရွင္မဆုိအားေပးပါတယ္။ ကုိယ့္ပရိတ္သတ္နဲ ့ကုိယ္ရွိတဲ့ အတြက္ဆက္လုပ္ပါ။ ဒီကားမွာေတာ့ Internationally ထုိး ေဖာက္ျပီးေအာင္ျမင္လုိ ့မ တုိ ့ေမ်ာ္လင့္ထားပါတယ္ ‘ လို႔ဆိုတဲ့ ‘သႏၱာလႈိင္’ ‘
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ဗွီဒီယို ရုပ်ရှင် အစားအသောက် အနုပညာ
“ဇင်အောင် နဲ့ အစ်မနဲ့ဆိုတာလည်း ထသတ်သင့်ရင်သတ်မှာပါပဲ”…
November 5, 2019 November 5, 2019 media9Comment(0)
“ဒိုင်လုပ်ရင်တော့အမုန်းခံရမယ်ဆိုတာ မျော်လင့်ပြီးသားပါပဲ။ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်မွေးထုတ်ပေးချင်တဲ့ ကိုယ့်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်တွေဟာဒီရှိုးအပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့အတွက် လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်သွားမှာပါပဲ”လို့ဆိုတဲ့ ‘သန္တာလှိုင်’… “ဒိုင္လုပ္ရင္ေတာ့အမုန္းခံရမယ္ဆိုတာ ေမ်ာ္လင့္ျပီးသားပါပဲ။ဒါေပမယ့္လည္း ကိုယ္ေမြးထုတ္ေပးခ်င္တဲ့ ကိုယ့္ကေလးေတြရဲ႕အိမ္မက္ေတြဟာဒီရႈိးအေပၚမွာမူတည္ေနတဲ့အတြက္ လုပ္စရာရွိတာဆက္လုပ္သြားမွာပါပဲ”လို႔ဆိုတဲ့ ‘သႏၱာလႈိင္’…
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ဗွီဒီယို အမေးအဖြေ
မိန်းမလျာ အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ရှားတယ်လေ..
[Unicode] မိန်းမလျာဆိုရင် ညီအကိုမောင်နှမတွထဲမှာ ၊ ဆွေမျိူးတွေထဲမှာ ဘယ်လို ဥပက္ခာပြုခံရလဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေရိုက်ချင်တယ် မိန်းမလျာ အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ရှားတယ်လေ.. ဒါပင်မယ့် အခုချိန်ထိမကြုံသေးတော့ ကိုယ့်အချစ်ရေးကို ပရိသတ်ကိုမချဖြစ်တာပါ လို့ဆိုလာသူ လင်းလင်း ( Makeup Artist) [Zawgyi] မိန္းမလ်ာဆိုရင္ ညီအကိုေမာင္ႏွမတြထဲမွာ ၊ ေဆြမ်ိဴးေတြထဲမွာ ဘယ္လို ဥပကၡာျပဳခံရလဲဆိုတဲ့ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးေတြ႐ိုက္ခ်င္တယ္ မိန္းမလ်ာ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းတယ္ဆိုတာ ရွားတယ္ေလ.. ဒါပင္မယ့္ အခုခ်ိန္ထိမႀကဳံေသးေတာ့ ကိုယ့္အခ်စ္ေရးကို ပရိသတ္ကိုမခ်ျပျဖစ္တာပါ လို႕ဆိုလာသူ လင္းလင္း ( Makeup Artist)